उटपट्याङ नगरी जीवनलाई नयाँपन यसरी दिन सकिन्छ, रमाइलो हुन्छ « गोर्खाली खबर डटकम
उटपट्याङ नगरी जीवनलाई नयाँपन यसरी दिन सकिन्छ, रमाइलो हुन्छ
हामी जहिले पनि नयाँ कुरा खोजिरहेका हुन्छौ । नयाँ कुराप्रति हाम्रो उत्सुकता बढी हुन्छ । जस्तो कुनै नयाँ परिकार भेटेमा हामी रमाउँछौ । नयाँ लुगा लगाउँदा हामी फुरुंग हुन्छौ । नयाँ ठाउँ घुम्न जाँदा हामी दंग पर्छौं । नयाँ चिज देख्दा हामी उत्सुक हुन्छौ । नयाँ काम गर्दा हामी जागरुक हुन्छौ ।
मानविय स्वभाव हो, नयाँ कुरा खोज्ने । हरेक चिजमा नयाँपन खोज्ने । तर, हामी आफ्नो जीवनशैली वा जीवन जिउने शैली नयाँ ढंगबाट गर्न चाहिरहेका हुँदैनौ । पुरानै शैली र ढर्रालाई निरन्तरता दिन्छौ । त्यही ओछ्यानमा सुत्छौ, त्यही खाना खान्छौ, त्यही गीत सुन्छौ, त्यही काम गर्छौ, त्यही मान्छेहरु भेट्छौ, त्यही ठाउँमा खाजा खान जान्छौ, त्यही गाडी चढ्छौ, त्यही बाटो हिँड्छौ ।
हामी एकोहोरिएका छौ । हामी एउटै शैलीभन्दा बाहिर आउन सकेका छैनौ । यही कारण हामीलाई आफ्नै दिनचर्या पनि दिक्कलाग्दो लाग्छ । हामीलाई खानाप्रति रुची लाग्दैन, काममा जान जाँगर चल्दैन । किनभने हामी त्यही गर्दागर्दै थाकेका छौ । खाना खान जानेभनेपछि हाम्रो मनमा जाग्दैन कि, आज केही नयाँ स्वाद चाख्दैछौ । काममा वा कार्यलय जानेभनेपछि हामीमा जाँगर चल्दैन कि, आज केही नयाँ काम गर्दैछु ।
हरेक कुरामा हाम्रो रेडिमेड शैली र धारणा छ । त्यसैलाई हामीले शिरोधर गर्दै आएका छौ । अस्ति जे गर्‍यौं, हिजो त्यही दोहोर्‍यायौ । आज त्यही गर्दैछौ । भोलि पनि त्यसै गर्नेछौ । केही नयाँपन छैन ।
त्यही कारण त मान्छेहरु सप्ताहन्त खोजिरहेका हुन्छन् । विदाको समय खोजिरहेका हुन्छन् । चाडपर्व खोजिरहेका हुन्छन् । तलब आउने दिन पर्खिरहेका हुन्छन् । ति दिनहरुले केही नयाँपन बोकेर ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा रहन्छ । हामी आफ्नो जीवन जिउने ढंगलाई फरक बनाउन सक्दैनौ । वा चाहँदैनौ । हिजो, अस्ति, भोलि र पर्सी हाम्रो दैनिकी त्यसरी नै बित्नेछ, जसरी बर्षौअघि वितेका थिए । र, आगमी बर्षौसम्म पनि हामी त्यस्तै दिनचर्यामा आफुलाई डोहोर्‍याइरहेका हुन्छौ । यसले गर्दा के हुन्छ ?
यसले गर्दा हामी नयाँ चुनौतीसँग जुध्नुपर्दैन । नयाँ उल्झनहरु झेल्नुपर्दैन । हिजो जस्तो थियो, आज त्यस्तै छ । भोलि पनि त्यस्तै हुनेछ । तर, सम्झनुहोस् त हामी चुनौतीकै लागि जन्मिएका हौ । चुनौतीमै जीवनको असली स्वाद पनि छ ।
हामी एउटै ढर्राबाट गुजि्ररहँदा त्यसले हामीलाई दिन कटाउनेभन्दा ठूलो उपलब्धी दिनेवाला छैन । हामी आज निरास छौ । दुःखी छौ । हामीलाई झर्को लागिरहन्छ । दिक्क लागिरहन्छ । पट्यार लागिरहन्छ । यही चरणबाट हामी क्रमस डिप्रेसनको अवस्थामा पुग्छौ । एउटै कुरा दोहोर्‍याइरहँदा हामीले नयाँपन अनुभव गर्न सक्दैनौ । तर, हरेक दिन झुल्कने घामसँगै हाम्रो नयाँ दिन सुरु हुन्छ ।
हरेक दिन चढ्ने घामको लालीसँगै हाम्रो जीवनको रंग पोतिन्छ । अर्थात हरेक दिन हाम्रो लागि नयाँ हो । अब आउने हरेक घण्टा, मिनेट, सेकेन्ड, पल हाम्रो लागि नयाँ हो । एक सेकेन्ड पछाडि के हुन्छ ? हामीलाई थाहा हुन्न । भरे वा भोलि के हुन्छ ? हामीलाई थाहा हुन्न । यसकारण हामी हरेक पललाई सेलिब्रेट गर्न तयार हुनुपर्छ । हरेक क्षण, हरेक पल हाम्रा हुन् । यसैमा हमी नयाँपन पनि खोज्नुपर्छ ।
आउनुहोस् केही नयाँ गरौ : सामान्य कुरा, आज तपाईंको दिनचर्या केही बदल्नुहोस् । ओछ्यान बदल्नुहोस् । खानेकुरा बदल्नुहोस् । कामलाई पनि अलि नयाँ ढंगले गर्नुहोस् । नयाँ साथीहरुसँग भेट्नुहोस् । नयाँ काम गर्नुहोस् ।
नयाँ कुरा गर्नुहोस् । सोंच र चिन्तन पनि नयाँ बनाउनुहोस् । अर्थात आजसम्म गर्दैर् आएका ढर्रा परिवर्तन गर्नुहोस् । आजसम्म अपनाउँदै आएको शैली केही बदल्नुहोस् । पहिरनमा, खानामा, काममा नयाँपन खोज्नुहोस् । तपाईंले पक्कै जीवनमा नयाँपन अनुभूत गर्नुहुनेछ ।
जीवन तपाईंलाई नयाँ लाग्नेछ । रसपूर्ण पनि । हिजोसम्म दालभात खानुभयो, आज खानेकुरा थोरै बदल्नुहोस् । भान्सामै नयाँ प्रयोग गर्नुहोस् । पहिरनमा पनि केही फेरबदल गर्नुहोस् । हिजो जसरी तपाईं आप्नो कार्यथलो पुग्नुभएको थियो त्यो भन्दा फरक बाटो अपनाउनुहोस् वा फरक साधन अपनाउनुहोस् । हिजो आफ्नो मोटरसाइकल, कारमा जानुभएको थियो, आज हिँड्नुहोस् । सार्वजनिक यातायात चढ्नुहोस् ।
हिजो जसरी काम गर्नुभएको थियो, त्यसलाई छाड्नुहोस् । आज नयाँ ढंगले काम गर्नुहोस् । यसरी गर्नुहोस्, मानौ तपाईंले त्यो पेशा-व्यवसाय पहिलो पटक गर्दै हुनुहुन्छ । यसले तपाईंमा बेग्लै फुर्ती, जोश, जाँगर पैदा गर्छ । चिया नास्ता हिजोको भन्दा आज फरक होस् । हिजो जहाँ नास्ता गर्नुभयो, त्यहाँ नजानुहोस् । हिजो जे नास्ता गर्नुभयो, त्यो आज नगर्नुहोस् । आज भेट्ने साथीहरु पनि पुराना नहोस् । नयाँ साथीहरु भेट्नुहोस् । नयाँ ठाउँमा जानुहोस् आफनो योजना र सोंचलाई पनि केही बदल्नुहोस् । जुन लक्ष्य र योजना छ, त्यसलाई नयाँ ढंगबाट पुरा गर्ने सोंच बनाउनुहोस् । यसले तपाईं केही नयाँपन अनुभूत गर्नुहुनेछ । भिन्न किसिमको कौतुहलता, उत्साह, उर्जा र उमंग मिल्नेछ ।
केही उटपट्याङ पनि गरौं : सधै भलाद्मी मात्र देखिने प्रयास नगर्नुहोस् । सधै गंभिर मात्र नबन्नुहोस् । सधै भावुक मात्र नबन्नुहोस् । मनलाई नियन्त्रण गरेर मात्र नराख्नुहोस् । बेलाबखत उटपट्याङ पनि गर्नुहोस् । यद्यपी यसले अरुलाई हानी, नोक्सानी हुनुभएन । अरुको अपमान हुनु भएन । केवल ख्यालठट्टा र रमाइलोका लागि मात्र होस् । घरमा होस् वा कार्यलयमा, आफ्ना सहपाठीमाझ केही उटपट्याङ गर्नुहोस् । परिचित मात्र होइन, अपरिचितमाझ पनि केही उटपट्याङ गर्न सकिन्छ । जीवन भनेको रमाइलो पनि हो । मनोरञ्जन पनि हो । यसले जीवनमा केही नयाँपनको अनुभूत गराउँछ ।